Shiinaha hal marxalad dab-dagaal warshad bamka iyo saarayaasha | Liancheng
nooca go'an-Taxanaha XBD Single-yada Single-nuugid Vertical (Horizontal) Naarta-dagaalanka saar (Unit) waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida dab-dagaal ee shirkadaha warshadaha iyo macdanta gudaha, dhismaha injineernimada iyo sare-u kacda. Iyada oo imtixaanka la waraystay by Kormeerka Tayada Gobolka & Imtixaanka Center for Fire-dagaal Qalabka, tayada iyo waxqabadka labada hoggaansamaan shuruudaha National Standard GB6245-2006, iyo waxqabadka oo hoggaanka u dhex waxyaabaha la mid ah qoyska.
1.Professional CFD qulquli software design waa la qaatay, hagaajinta tayada shaqo bamka ee;
Qaybo 2.Beerta meesha biyaha webigu ay ku jiraan sanduuqa battariga ee bamka, bamka cap iyo impeller waxaa la sameeyey ee cusbi addoonsi caaryada aluminium ciid, hubinta la simi iyo channel socodka loo dardar iyo muuqaalka iyo kobcinta tayada shaqo bamka ee.
Xidhiidh toos ah u dhexeeya 3.Beerta motor iyo bamka nayaa qaab-dhismeedka driving dhexe iyo hagaajinaysaa hawlgala xasiloonida, samaynta unit bamka stably ay maamulaan, si ammaan ah oo loogu kalsoonaan karo,
4.The usheeda dhexe seal farsamo ayaa la eego hawl yar in daxalaystay, Caawiyay Xulkiisa ee usheeda dhexe si toos ah-xiran si fudud u keeni kartaa failure of seal farsamo. Taxanaha XBD-hal marxalad bambooyin hal nuugid waxaa la siiyaa darafta ahama si looga fogaado abuurmeena, dheereynaya nolosha adeeg bamka iyo yaraynta kharashka dayactirka socda.
5.Since ah bamka iyo motor ku yaalaan on usheeda dhexe ah isla, qaab-dhismeedka driving dhexe waxaa fududeeyey, yaraynta kharashka kaabayaasha by 20% ay kasoo horjeeddo bambooyin kale ee caadiga ah.
Tani taxane bamka u hoggaansamaan Heerarka ISO2858 iyo GB6245
Previous: kala siman bamka dab-dagaal
: Next Kooxda bamka dab-dagaalka-yada hal siman
Kooxda multistage bamka dab-dagaalanka
Naaftada ENGINE DABKA-DAGAALADA bamka DEGDEGGA AH
Double nuugid Split Case saar , Dheecaan ku listo Machine , Vertical Wabka saar , caajisay Well biyaha saar ah ,